लामो समयसम्म मास्क लगाउँदा मृ*त्युसम्मको ख*तरा ! – Butwal Sandesh
लामो समयसम्म मास्क लगाउँदा मृ*त्युसम्मको ख*तरा !
कोरोनाको महामारीले मानिसहरु संक्रमणबाट बच्न मास्कको प्रयोग गर्दछन् । तर कतिपय अवस्थामा त्यहि मास्कले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने गरेको छ । यदि तपाई पनि मास्कको प्रयोग गर्नुहुन्छ ? लामो समय सम्मप्रयोग गर्नुहुन्छ भने सावधान ! यसले तपाईको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।
१. लामो समय मास्क लगाउँदा मास्क भित्र अक्सिजनको कमी भई कार्बनडाइ अक्साइड भरिन्छ । यसले हाई लेवलमा कार्बनडाई अक्साइड स्वासमा भरिन्छ । जसका कारण मानिसको मृ*त्यु समेत हुनसक्छ ।
४. आम अवस्थामा वातावरणमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा ० दशमलव ०४ प्रतिशत हुन्छ तर यो मात्रा बढेर १० प्रतिशतभन्दा बढि भयो भने यसले ज्या न लिन सक्छ ।
कोरोनाको महामारीबाट बच्न चिकित्सकहरु एन ९५ मास्क लगाउने सुझाव दिन्छन् । तर मास्क लगाउँदा लगातार लामो समयसम्म लगाउनु हुदैन । अझ दौडदाँ वा छिटोछिटो हिड्दा मास्क लगाउनु हा निकारक हुन्छ । यस्तो बेला मास्क खोल्नु पर्दछ । घर बाहिर निस्कदा अनिवार्य मास्क लगाएर मात्र निस्कनु होला । तर ध्यान रहोस् यो टाइट लगाउनु हुदैन ।